Paasteriin yakka Maallaqa Daddabarsuun himatame Afrikaa kibbaaf dabarfamee Kennamuuf - NuuralHudaa
Paasteriin yakka Maallaqa Daddabarsuun himatame Afrikaa kibbaaf dabarfamee Kennamuuf
Paasterii fi hogganaa waldaa amantaa Kiristaanaa lammii Maalaawii kan ta’e, Paaster Sheefird Bushiirii fi Jaartiin isaa ji’a tokko dura Afrikaa Kibbaatti yakka maallaqa karaa seeraa alatti daddabarsuu ( money laundering) fi waliin dha’uun himatamanii, manni murtii mirga wabiin akka lakkifaman murteessee ture.
Mirgi wabii eegameef kun Afrikaa Kibbaa keessaa akka hin baane kan dhorku ture, haata’u malee paastarichaa fi jaartiin isaa dhokatanii Afrikaa Kibbaa irraa bahuun Maalaawii baqatan.
Pireezidantiin Malaawii Laazaarus Chaakiweeraa dhiheenya daawwannaa hojiif Afrikaa kibbaatti imale ture, daawwannaa kana irratti komiin Paastar Bushiiriin akka miliqu gargaarte jedhu irratti ka’e ture.
Dhimmicha irratti mootummoonni biyyoota lamanii ibsa baasaa turan.
Kanuuma hordofuun Ministirri dhimma biyya keessaa Maalaawii Riichaard Baandaa, namni amantii biyyattii Paastar Bushiirii fi haati warraa isaa Maary, Afrikaa Kibbaaf dabarfamanii akka kennaman mallatteessuu miidiyaaleen biyyatti gabaasan.
Haaluma kanaan Manni Murtii Maalaawii kanaan dura Afrikaan Kibbaa yakkamtootni lameen dabarfamanii akka kennamaniif gaaffii waan hin dhiheessiniif akka bilisa ta’an murteessee turullee, amma ammoo gaaffiin waan dhiyaateef dhimma isaanii kan ilaaluf December 22 kan beellame tahuu Daily Times gabaase.
Paastarri umrii 37 kun bara 2002 irraa kassee Maalaawii dabalatee biyyoota Afriikaa hedduu keessatti, maqaa Wangeela lallabuun yeroo socho’aa turetti qabeenya guddaa kan horate yoo tahu, qabeenyi kun kan karaa seeraan alatti horate tahuu mala shakkii jedhu uumee jira.
Bara 2018 keessas mootummaan Bootiswaanaa yakka walfakkaatuun bataskaana isaa tokko kan cufee fi akka inni biyyattii hin seene dhorkuu odeeffannoon ni addeessa.
feeysal khalid says:
waan garri jirtan itti fufaa
September 22, 2021 sa;aa 5:38 am Update tahe